I-ASUS NovaGo, ilaptop eneprosesa ephathekayo kunye neeyure ezingama-22 zokuzimela | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | Iilaptop
Ixesha elitsha leencwadana liza. Ukufika kweefowuni ezinkulu ezinamandla kwimarike, yayisele ithethiwe ngokungathi siphethe ikhompyuter epokothweni. Kwaye kukuba amandla okulungisa aphezulu kakhulu kwiimodeli ezikhoyo ngoku. Ke, kuthethwe kwaye kwenziwa: ezi processor ziya kuba yintliziyo yebhetshi yeencwadana ezizayo zokufika kwintengiso. Kwaye enye yeyokuqala esiza kuyibona yile ASUS NovaGo.
Inkampani yaseTaiwan i-ASUS sele inamava okuba yeyokuqala ukusungula amaqonga amatsha. Kwaye ngeli xesha uyenza ngeLaptop leyo thembisa ukudityaniswa ngalo lonke ixesha; Kulula kakhulu ukuyisebenzisa (ngokusekwe kwiWindows) kunye nokuzimela ngaphandle kwesiqhelo kwicandelo eliphathwayo.
1 I-ASUS NovaGo: eyokuqala yeqonga 'eliQhagamshela iiPC'
2 Intliziyo eshukumayo yoyilo lweelaptop
3 Unxibelelwano kubude kunye nokuzimela kweselfowuni
4 Inkqubo yokusebenza, ukufumaneka kunye nexabiso
I-ASUS NovaGo: eyokuqala yeqonga 'eliQhagamshela iiPC'
I-ASUS sele ifumene irhanisi layo elabeka amaqanda egolide xa kwavela awokuqala zeencwadana - nabani na uyazikhumbula ezo I-ASUS Eee PC 701? -. Kwaye ifuna ukwenza okufanayo neqonga likaMicrosoft "Soloko liQhagamshele iiPC". Eli qonga liza kuzama bonelela ngezixhobo kwintengiso eziya zifuna ukubamba ngakumbi kunye nokuzimela komsebenzi kude nekhaya okanye eofisini.
Kwaye kulapho i-ASUS NovaGo ingena khona, ilaptop efumana isikrini se-intshi ye-13,3; Ukubuyiselwa kwe-LED kunye nokufikelela kwisisombululo esiphezulu seepikseli ze-1.920 x 1.080. Kwakhona, le paneli Iyasongelwa iphelele ipilisi ukusebenzisa kunye nokusebenzisa i ipentiki. Ukongeza, ubunzima bayo ziikhilogremu ze-1,39 kwaye ibonelela nge-chassis eshinyeneyo ye-1,49-ukukunika umbono: I-MacBook ka-Apple inobunzima be-920 gram kwaye ubukhulu bayo bungu-1,31 cm.
Kwakhona, ukuba ujonga uyilo lwayo lwangaphandle, amaqhosha omzimba olawulo lwevolumu okanye on / off, kakhulu kwisitayile seselfowunikwicala elinye kwaye ungangenisi ikhibhodi ephambili. Ewe, ikhibhodi iya kukhululeka ukuyisebenzisa kwaye kwi-trackpad siya kuba nomfundi ofunda iminwe ukuvula izixhobo ngokhuseleko olukhulu.
Intliziyo eshukumayo yoyilo lweelaptop
Isamsung okanye iApple sele isinike imikhondo apho imakethi yayiye khona. I-Apple ene-iPhone yayo okanye i-iPad eneprosesa enamandla kangangokuba ifezekisa ukusebenza okungcono kuneelaptops; Isamsung yongeze isiseko kwii-mobiles zayo eziphezulu zokuba xa iqhagamshelwe kwimonitha ibe yikhompyuter eqhelekileyo.
Ewe, uqhubeka nale mibono, I-ASUS idibanisa iprosesa yeselfowuni kwi-NovaGo yayo: Snapdragon 835 (Kwale isetyenziswa zii-mobiles ezinje nge-OnePlus 5, i-Samsung Galaxy S8 okanye i-Samsung Galaxy Qaphela 8. Kutheni le processor? Kuba ibonelela ngamandla kunye nokusebenza kwamandla. Ngokufanayo, le chip ingongezwa kwimemori ye-RAM ukuya kuthi ga kwi-8 GB kunye Indawo yokugcina Flash ukuya kuthi ga kwi-256 GB.
Unxibelelwano kubude kunye nokuzimela kweselfowuni
Sithetha ngelaptop hayi iselfowuni. Ke ngoko, unxibelelwano ngokwasemzimbeni kufuneka lubekho kulo msebenzi. Kule meko, i-ASUS NovaGo iya kuba nesiphumo se-HDMI kunye namazibuko amabini e-USB 3.1 (uhlobo A) - mhlawumbi banokubandakanya i-USB-C- kunye Amakhadi e-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-256 GB ebuninzini.
Nangona kunjalo, eyona nto inomdla ivela kwisandla sonxibelelwano olungenazingcingo. Le laptop ye-ASUS iya kuba ne-WiFi ac MIMO 2 × 2 yokugubungela ngakumbi kunye nesantya; ngekhe ubenonxibelelwano lweBluetooth (?) kunye Imodem ye4G LTE (Imodem yeQualcomm Snapdragon X16 (iGigabit LTE eneDL: 1Gbps, UL: 150Mbps; 4 × 4 MIMO)). I-ASUS NovaGo iya kuba nakho ukusebenza ngamakhadi eNanoSIM (nge-microSD slot) okanye nge Amakhadi eSIM.
Okokugqibela, ukuba sithetha ngentliziyo yeselula netekhnoloji yeselfowuni nge-chassis yelaptop, ibhetri ayinakuphoxeka. Kwaye kule meko kunjalo thembisa ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-22 zokuzimela kwityala elinye; Siza kubona kwiimvavanyo zokwenyani ukuba ziyinyani kangakanani.
Inkqubo yokusebenza, ukufumaneka kunye nexabiso
Le ASUS NovaGo izakuza nayo Windows 10 S ifakwe kwangaphambili. Eli qonga luguqulelo olukhanyayo kakhulu lwe Windows 10, ke ngokuqinisekileyo ngekhe sibe nazo zonke izicelo ezikhoyo. Ngaphezu, le nkqubo yokusebenza yazalwa inombono wokujongana neeChannelbook. Ngoku, ngokwiphepha laseTaiwan, le laptop inokuphuculwa Windows 10 Pro simahla.
Iindaba ezimbi zezokuba xa ibonakala okokuqala kwi-2018 iyakwenza njalo kwezinye iimarike ezingabandakanyi iSpain. Iya kuyenza apha: I-United States, i-United Kingdom, i-Itali, i-France, i-Jamani, i-China kunye ne-Taiwan. Kwaye amaxabiso aya kuba yi- $ 599 (i-504 euros yokutshintsha) yenguqulo ene-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yendawo. Ngelixa umphezulu woluhlu (i-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yendawo) uya kuthi xhaxhe kwi-799 yeedola (i-673 euro).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » I-ASUS NovaGo, ilaptop eneprosesa ephathekayo kunye neeyure ezingama-22 zokuzimela
Konwabele ukulinda de kufike uSanta Claus ngo "Landela uSanta Claus"